कुवेतबाट आयो यस्तो दुःखद खबर, ६ नेपालीकाे खाल्डोमा पुरिएरै गयो ज्यान! – PathivaraOnline
Home > प्रवास > कुवेतबाट आयो यस्तो दुःखद खबर, ६ नेपालीकाे खाल्डोमा पुरिएरै गयो ज्यान!
फागुन ०२, काठमाडाैँ – कुवेतमा काम गर्ने क्रममा बालुवाको ढिस्कोले पुरिएर कुवेतमा छ नेपालीको मृ’त्यु भएको त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले पुष्टि गरेको छ । मृ’त्यु हुनेमा पाल्पाका एकबहादुर गाहा, सिरहाका गङ्गाराम चौधरी, ताप्लेजुङका वसन्त गुरुङ र दाङका श्यामनारायण चौधरी छन् । दुई मृतकको पहिचान हुन बाँकी रहेको दूतावासले जनाएको छ । दुर्घटनामा परी धर्मेन्द्रकुमार शाह र मनोरथ मण्डल घाइते भएका छन् ।
घाइतेमध्ये शाहको कुवेतस्थित जाहरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको र अर्का सामान्य घाइते मण्डल उपचारपश्चात कम्पनीमा फर्केको दूतावासले जनाएको छ । उनीहरु कुवेतस्थित ‘युनिभर्सल लेडर्स ट्रेडिङ एण्ड जनरल कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनी’मार्फत अल मुट्ला सिटी प्रोजेक्टमा कार्यरत थिए । घटनास्थल दूतावासबाट करीब डेढ घन्टाको दूरीमा रहेको छ । घटनालगत्तै दूतावासका कर्मचारीले घाइते कामदारको उपचारमा सहजीकरण गरेका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस : महसुल तिर्ने खुरुखुरु, धारामा पानी नआएर रुनुपर्ने धुरुधुरु
मुलुकमा घट्दो क्रममा रहेको पानीको स्रोत र जटिल प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको सरसफाइ तथा स्वच्छताको सम्बन्धमा वर्तमान समय सान्दर्भिक कानून निर्माणका लागि प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा अहिले ‘खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ माथि दफाबार छलफल भइरहेको छ ।
खानेपानीको स्रोत संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कसको रहने, नागरिकको मौलिक अधिकारभित्र परेको स्वच्छ खानेपानी पिउने उपभोक्ताको अधिकारको सुनिश्चित कसरी गर्ने, यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने, आएका विविध जटिलतालाई कसरी सम्बोधन गर्नेलगायतका विषयलाई कानूनमै समावेश गर्न सो विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको हो ।
खानेपानीमन्त्री बिना मगरले गत जेठ ५ गते संसद्मा दर्ता गर्नुभएको उक्त विधेयक गत भदौ १ गते छलफलका लागि समितिमा आएको हो । सांसदहरुले विज्ञ र सरोकारवालाको समेत राय लिएर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास गरिरहेका छन् ।
समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले पानी र सरसफाइ जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा कानून निर्माण गर्न लागिएकाले स्रोत संरक्षण र व्यवस्थापन तथा वर्तमान जटिलतालाई कसरी कानूनमा समावेश गर्ने भन्ने कुराको सुझावका लागि विज्ञसँग राय मागिएको बताउनुभयो ।
युथ एलायन्स फर इन्भाइरोमेण्टले एक वर्ष लगाएर पश्चिमका विभिन्न जिल्लामा गरेको अध्ययनले ७० दशमलव ०७ प्रतिशत मुहानबाट पानीको बहाव (मूलबाट निस्कने पानीको मात्रा) घटेको देखाएको छ । उक्त समस्या देशव्यापी भए पनि तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा फरक–फरक अवस्था रहेको युथ एलायन्सका अध्यक्ष सनोत अधिकारीले बताउनुभयो । आजभन्दा २० वर्षअघि त्यही मूलबाट एक गाग्री भरिन दुई मिनेट लाग्नेमा अहिले त्यही मूलबाट गाग्री भरिन पाँच मिनेट लाग्ने अवस्था रहेको अनुसन्धानकर्ताको भनाइ छ । कतिपय मूल सुकेका छन् भने कतिपय तल सरेको छ । मुहानको संरक्षण र स्रोत व्यवस्थापनमा कतैबाट ध्यान नपुगेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
जलवायु परिवर्तन, गाउँ घरतिरका आहाल, कुला, पोखरी हराउँदै जानु, अव्यावस्थित रुपमा बाटोघाटो निर्माण, भूकम्पलगायत प्रकोपका कारणले पानीका मुहान सुक्दै गएको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ । मौलिक अधिकारभित्र परेको शुद्ध खानेपानीको पहुँचबाट नागरिक अहिलेपनि वञ्चित छन् । काठमाडौँ उपत्यकामै खानेपानीको हाहाकार छ । उपभोक्ताले शुद्ध खानेपानी पाउन सकेका छैनन् ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य रामबहादुर विष्ट मुलुकमा ‘महसुल तिर्नुपर्ने खुरुखुरु, धारामा पानी नआएर रुनुपर्ने धुरुधुरु’को वर्तमान अवस्था चुनौतीपूर्ण छ भन्नुहुन्छ । उहाँले पानी नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरी उपभोक्ताको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न आएको विधेयकमा गम्भीर छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । विपन्न वर्ग, हुनेखाने र उद्योगपतिको अवस्था अनुसारको महसुल निर्धारण गरी न्यूनआय भएकालाई सरकारले नै खानेपानी उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
डोली चढाउनै आँटेकाे छोरीलाई चितामा चढाउनु पर्दाकाे पीडाले घर परिवारमा चल्यो यस्तो रूवाबासी (भिडियो हेर्नुस्)
परिवारले माफ गरिदिन्छन् कि भन्ने आश थियो, गरेनन्, गो’ली हानेर मृ’त्युदण्ड दिइयो (भिडियो सहित)
कतारमा रहेका सयौं नेपाली कामदारलाई निकाल्यो, कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्न भन्दै हिरासतमा लगियो
नातिको विवाहका लागि बेलायत गएका केसीलाई काेरोनाले कहिल्यै नेपाल नफर्किने गरि लग्यो